ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ရင်သွေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးသင့် သလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): ရင်သွေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးသင့် သလဲ?
ရင်သွေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးသင့် သလဲ?
အသက် ၄ လနဲ့ ၆ လအတွင်း မိမိကလေးငယ် အဆင်သင့် ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ စပြီး ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးလို့ ရပါပြီ။ အဲ့ဒီ မတိုင်ခင်တော့ မိခင်နို့ (သို့) နို့ဘူး က ကလေး အတွက် လိုအပ်သမျှ ကယ်လိုရီ နဲ့ အဟာရတွေ ကို ဖြည့်တင်း ပေးပါတယ်။
ဖြည့်စွက်စာ စားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ် မဖြစ် အောက်ပါ အချက်တွေကို ကြည့်ရူ စစ်ဆေးနိုင် ပါတယ်။
• ဦးခေါင်းကို တည့်မတ်စွာ ထားနိုင်ခြင်း - ကလေးငယ်ဟာ သူ့ဦးခေါင်းကို တည့်မတ်စွာဖြင့် ငြိမ်ငြိမ် ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
• အစာကိုပြန်ထွေး မထုတ်ခြင်း - ကလေးငယ်ဟာ ဖြည့်စွက်စာကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထားပြီး ၀ါးစားနိုင်ဖို့ အတွက် လျှာကို အသုံးပြုကာ အစာတွေကို ပါးစပ်ထဲမှ ပြန်ထွေး မထုတ်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
• နောက်မှီ ကူရှင်ဖြင့် ကောင်းကောင်း ထိုင်နိုင်ခြင်း - ကလေးငယ်ဟာ ခုံအမြင့်နဲ့ ထိုင်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးရင် အစာကို ကောင်းကောင်း မြိုချနိုင်ဖို့ အနည်းဆုံး နောက်မှီ ကူရှင်နဲ့တော့ ကောင်းကောင်း ထိုင်နိုင်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
• ကိုယ်အလေးချိန် တိုးလာခြင်း - ကလေး အများစုဟာ ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးဖို့ဆိုရင် သူတို့ မွေးစဉ်က ကိုယ်အလေး ချိန်ထက် နှစ်ဆဖြစ် လာဖို့လိုပြီး အနည်းဆုံး အသက် ၄ လ ရှိရ ပါမယ်။
• အစားအသောက် ပိုစားလိုခြင်း - ကလေးငယ်သည် မိခင်နို့ သို့ ဖော်မြူလာ(နို့ဘူး) ကို ၈ ကြိမ် မှ ၁၀ ကြိမ် သောက်သုံးသော်လည်း ဆာလောင်နေ တတ်တယ်လို့ ထင်ရပါမယ်။
• လူကြီးတွေ ဘာစားလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင် စားလာခြင်း - ကလေးငယ်ဟာ လူကြီးတွေ ပုဂံထဲက အစားအသောက်ကို စိုက်ကြည့် နေတတ်ပြီး လက်နဲ့ လှမ်းဆွဲယူ တတ်လာမည်။
Originally published at - http://health.thithtoolwin.com/2016/01/blog-post_1.html
Posted by Te Tee at 10:43 PM